Indawo yokuzonwabisa ye-Althütte, i-Ebnisee, ihlathi lase-Swabian - I-Airbnb
Indawo yokuzonwabisa ye-Althütte, i-Ebnisee, ihlathi lase-Swabian
Le ndlu ikwiresort yaseAlthütte, embindini wehlathi laseSwabian. Iikhilomitha eziyi-35 ngaphandle kwamasango ekomkhulu likarhulumente eStuttgart, uza kufumana apha, kwindawo ethe cwaka, epholileyo nendalo ecocekileyo. Amagumbi amathathu akwi-80Mwagen anendawo eninzi xa iyonke. Yonke le ndawo ijikwe yindawo evulekileyo kunye negadi yendalo, enendawo evulekileyo yokuphumla. Ingakumbi xa kuza kuhlalwa ixesha elide unayo yonke into oyidingayo ukuze uphumle kamnandi.
Sikhangele phambili ekukwamkeleni kwiflethi yethu yale mihla nenento yonke enendawo yokungena eyahlukileyo kwindawo entle enelanga engaselunxwemeni lwehlathi eAlthütte.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi aliqela, nenendlela yokungena, inayo yonke into oyifunayo ukuze ube nexesha elimnandi kunye nathi ngaphezu kweemiliyoni eziyi-80. Amagumbi okulala amabini ahlukeneyo anokuhlala abantu abayi-2 ngabanye (Sithanda ukuchaza ukuba igumbi lesibini alifumaneki ukuba kuhlalwe abantu abangaphantsi kwabayi-3). Ikhitshi linesitovu, ioveni, umatshini wokuhlamba izitya, i-microwave, ifriji okanye i-freezer. Sine-shower/ibhafu, I-SATELLITE TV, i-Wi-Fi kuwo onke amagumbi kunye nendawo ephandle, ithala elikhulu elinetafile nezitulo, indawo eyahlukileyo kuwo onke amagumbi, kunye nendawo yokupaka ngqo endlwini. Ukongezelela, iflethi yethu ayina-allergies.
Kanye ngaphandle komnyango ongaphambili yindawo yendalo ethandwayo eStrümpfelbachtal, ekumema ukuba unyuke intaba kunye neKeuperklingen kunye nemizila yamanzi emininzi. Ngezantsi kwe-Nonnenmühle, indlela eqalayo ekhokelela kumanzi abonakalayo kwiingxangxasi zesihlabathi ezintle kunye neebhentshi zamatye eziphuzi ukuya kwiWieslauf Valley.
kumgama wokuba ungaya "ePearl of the Swabian Forest" njengoko iEbnisee idla ngokubizwa ngokuba yi-Ebnisee. Elona chibi likhulu kwihlathi laseSwabian kwaye ayiyondawo ithandwayo yabalandeli bokuqubha ehlotyeni, kodwa yindawo yokunyuka intaba ethandwayo ebudeni bonyaka ngenxa yendawo entle kunye nehlathi elixubileyo eliyingqongileyo. Kukho iindawo zokoja inyama, amatye, izinto ezihlaziyayo, iindawo zokugcakamela ilanga, ukuqeshisa ngebhayisekile, ukukhwela isikhephe kunye nokukhwela isikhephe, ibala lokudlala labantwana, iholo yentenetya kunye ne-squash, iindawo zokuloba.
Schwabenpark Ukuze ube nosuku olumnandi, akunyanzelekanga ukuba uye kude. Ngaba ukwimeko entle yokuzonwabisa? Emva koko yiya eSwabian Park. Ikhethekile kwiintsapho ezinabantwana, ngaphezu kweendawo eziyi-60 ezonwabisayo nezahlukileyo kunye nezinto ezinokonwatyelwa zeenkawu zilindele zonke iindwendwe, ezincinci nezidala. I-roller coaster ekhethekileyo ehlabathini lonke "i-Wilde Kaende" inikezela ngeebhedi zabantwana ezininzi xa uqala ukubona. Ukukhwela kwinqaba ye-fairytale, ivili likaFerris okanye uloliwe we-tractor kukhululekile. Umjikelo omkhulu wenqanawa, iSanta Lore, uphezulu. Ngaba ukwimeko entle yokuzonwabisa? Emva koko yiya eSwabian Park."
Ihlobo le-toboggan libaleka eKaisersbach.
Apha ungalala kamnandi kwiindawo eziphithizelayo njengeengcali uze uvavanye ubunzima. Ukubaleka kwe-toboggan ehlotyeni kuye kwathatha iminyaka engaphezu kweyi-40 ukutyibiliza ekhephini. Isikhululo sikaloliwe eside yi umazibuthe wabantwana nabantu abadala: i-tobogganing ehlotyeni - "into eshushu kakhulu"! Iilifti ezimbini ezijingayo neelifti ezimbini ze-ski ziyafumaneka ebusika.
Ukongezelela koko, le ngingqi ineendawo ezininzi onokuya kuzo njengendawo yokuzonwabisa yeemvakalelo, zonke iintlobo zamathuba okunyuka intaba afana nomzila wokunyuka intaba, iBrunnen neBächlestour, kodwa kukho namachibi amaninzi afana neAichstruter Stausee, iFnsbacher Waldsee, iLeinecksee, iEisenbachsene, iHagerwaldsee, kunye neHörschbach Waterfalls. Abathandi beetreyini banokuzonwabisa ngokukhwela uloliwe kwisitishi sehlathi esinembali. Iivenkile zokutyela ezininzi zikunika ukutya okumnandi kufutshane. Kwindawo ekufutshane uza kufumana, ngokomzekelo, ivenkile yokutyela iStrohbecks, eyamkela wena kunye ne-bourgeois, i-Swabian cuisine. Elinye icebiso yivenkile yokutyela i-zur Obermühle eWelzheim.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Althütte